အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 ခြေထောက်နဲ့ Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 ခြေထောက်နဲ့ Tattoos ဒီဇိုင်း Idea
sonitattoo နိုဝင်ဘာလ 22, 2016
သငျသညျလက်မှတ်ရေးထိုးသင့်ခန္ဓာကိုယ်အချို့အပိုင်းအစရတဲ့အကြောင်းကိုမှန်လျှင်, သင်သည်တစ်လျောက်ပတ်သောကုန်ကျစရိတ်ပေးဆောင်ဖဲ့ခြွေမပေးသင့်ပါတယ်။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကအစဉ်အမြဲသင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်လဲလျောင်းမည်! ဤသူသည်သင်တို့အဆင်းလှသောခြေထောက်တက်တူးထိုးရှိသင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
1. စူပါလှပခြေထောက်နဲ့ Tattoos
2 ။ ချိုမြိန်ခြေထောက်တက်တူးထိုးရှာဖွေနေ
#leg တက်တူးထိုးရှာနေချိုမြိန်လူတွေကြောက်မက်ဘွယ်ထူးကဲကြည့်ဖို့၏အသုံးချနေဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်ကြသည်။ ဒီခြေထောက်တက်တူးကြောက်မက်ဘွယ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။
3 ။ ရိုးရှင်းသောခြေထောက်တက်တူး
4 ။ chic ခြေထောက်တက်တူး
အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ပိုကောင်းသည် သာ. ကြီးမြတ်သည့်စွဲချက်ဖြစ်ကြသည်။
5 ။ ရောင်စုံခြေထောက်တက်တူး
သငျသညျမကြာမီကတိုတောင်းအသိပေးစာမှာ #tattoos ပြီးပါကအဘို့နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုဒေါ်လာကြဲရကျိုးနပ်မယ့်နားလည်ပါလိမ့်မယ်။
6 ။ ချစ်စရာခြေထောက်တက်တူး
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဧကန်အမှန်တန်ရာကိုအကောင်းဆုံး, သင်ထိပ်တန်းထစ်တက်တူးထိုးဘို့လိုအပ်ငွေကိုတပ်အတိုင်းအတာတစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်အတွေးရတစ်ချိန်က, သင်ငွေမနှမြောဖို့အခွင့်အလမ်းထဲကတစ်ကန်ရနှင့်ထဲမှာယုတ်သောကာလ၌တစ်ဦးထက်သာလွန်အစီအစဉ်အကြံကိုကြံစည်ခြင်းငှါ နှင့်သင့်တက်တူးထိုး၏အကြမ်းဖျင်း။
7 ။ Mesmerize ခြေထောက်တက်တူး
8 ။ အံ့သြဖွယ်ခြေထောက်တက်တူး
9 ။ cool ခြေထောက်တက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
ဆိုင်မှတစ်ဦးအလည်အပတ်သင်သည်ပါဝင်သည်အလုပ်တစ်ခုစမတ်အတွေးရနိုင်အဖြစ်ပိုပြီးအသုံးဝင်သည်, သင်ကုန်ကျစရိတ်၏တစ်ဦးထက်ပိုတိကျတဲ့အတွေးရနိုင်, သင်စဉ်းစားခဲ့ကြပေမည်သည့်တက်တူးထိုး၏အစီအစဉ်တွင်မဆိုညှိနှိုင်းမှုဖျူးရန်သင့်အားခွင့်ပြု ရှိသည်ဖို့အကြောင်းကို။
10 ။ စူပါခြေထောက်တက်တူး
အချို့သောဒေသများသည်သူ၏တာဝန်ခံပြုစုပျိုးထောင်လက်သမားလှုံ့ဆော်, ပုံမှန်အားဖြင့်ဒုက္ခနေကြသည်: ဤတွင် inking ၏တပြင်လုံးကိုကုန်ကျ ကိုးကား. များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစဉျးစားဆငျခွဖြစ်ကြသည်။
11 ။ လှပသောခြေထောက်တက်တူး
12 ။ cool ခြေထောက်တက်တူး
ခန့်မှန်းချက်ကိုသင်ပေးဆပ်ရန်လိုအပ်သည်ကုန်ကျစရိတ်မှာမရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးအတွေးဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားအဆိုပါပိုကြီး, ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုလာ။
13 ။ အပြည့်အဝခြေထောက်တက်တူး
14 ။ ဝက်ခြေထောက်တက်တူး
တစ်ဦးအတည်ပြုတဲ့လက်သမားကနေကိုးကားရတဲ့နေစဉ်, သငျသညျ, ကတိသစ္စာပြုအစီအစဉ်ကိုတောင်းဆိုပိုပြီးအထူးကုနှင့်အတူစစ်ဆေးသို့မဟုတ်သင့်ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်အရသိရသည်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
15 ။ ကို Creative ခြေထောက်တက်တူး
သင်အမှန်တကယ်သူ့ရဲ့ယေဘုယျစိတ်ကူး relinquishing မရှိဘဲသင်၏စီစဉ်ထားတက်တူးထိုး, ဒါမှမဟုတ်ကြေကွဲအချက်သည်၎င်း၏သိမ်မွေ့ဒြပ်စင်များ၏ဧရိယာပြောင်းလဲနေတဲ့စဉ်းစားပါလိမ့်မည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်စီစဉ်ပေးအလားတူအဖြစ်ပိုငွေမနှမြောပြီးအပေါ်ဆုံးထစ်တက်တူးထိုးရရှိရန်အချိန်အတန်ကြာတင်းကျပ်စွာထိုင်လျက်ဖဲ့ခြွေမဟုတ်ဘူး!
16 ။ အပြည့်အဝခြေထောက်တက်တူး
17 ။ ခြေထောက်တက်တူးထိုး Love
တစ်ဦးတက်တူးထိုးရယူခြင်းဇွဲနှင့်စွမ်းအင်လိုအပ်တစ်ခုခုပါပဲ။ သငျသညျလေဆာဖယ်ရှားရေးအတွက်ပေးချေရန်လိုအပ်ဒါကြောင့်သင်ရသောတက်တူးထိုးအချို့ကိုသင်အချိန်အတှကျလိုအပျကွောငျးအရာတစ်ခုခုကြောင်းသေချာဖို့ရှိသည်မဟုတ်လျှင်သင်, သင်၏အသက်တာတွင်ကျန်ကြွင်းသမျှအဘို့တက်တူးထိုးနှင့်အတူအသက်ရှင်သငျ့သညျ။
18 ။ တော်တော်လေးခြေထောက်တက်တူး
19 ။ အစွမ်းထက်ခြေထောက်တက်တူး
20 ။ Awesome ကိုခြေထောက်တက်တူး
21 ။ အများစုမှာအံ့သြဖွယ်ခြေထောက်တက်တူး
သင်တစ်ဦးတက်တူးထိုးရမရှိမရှိစဉ်းစားကြသောအခါ, သင်ဘယ်နေရာမှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ get ဖို့ရှေးခယျြသငျ့သညျ။ သင်ဖွင့်လှစ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အလုပ်အကိုင်အထဲကရှိသည်သောဖြစ်ရပ်အတွက်, ထို့နောက်သင်ဖုံးကွယ်နိုငျသောအကွာအဝေးအတွင်းတက်တူးထိုးရနျရှေးခယျြနိုငျသညျ။
22 ။ ပန်းပွင့်ခြေထောက်တက်တူး
သင်သည်သင်၏အလုပ်ဖြေရှင်းရန်နှင့်သူတို့တက်တူးတခုတခုအပေါ်မှာအစီအစဉ်ရှိမရှိစစ်ဆေးအာမခံပါသည်။ တိကျတဲ့ကျော်ကြားမှုကိုသင်နှင့်အတူတက်တူးထိုးတက်ကိုဖုံးလွှမ်းစေမည်ကိုပုံဖျောဖို့လိုအပျကွောငျးဒစ္စနေးဆင်တူသိသိသာသာအဖွဲ့အစည်းများ, သင်တို့အမြင်အပေါ်သောအရပ်ဌာန၌တက်တူးထိုးရှိသည်သောဖြစ်ရပ်အတွက်တက်ပါစေ။
23 ။ sexy ခြေထောက်တက်တူး
က may ကဲ့သို့ဖြစ်ရ, အများဆုံးကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအခွအေနကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပြီးတက်တူးအဖြစ်တာဆိုပိုရှည်ပေါ်ငုံ့ကြည့်ကြသည်မဟုတ်။ အမှန်စင်စစ်ရဲထံမှပင်တစ်ဦးချင်းစီပြသနိုင်ဖို့ wear တက်တူးအတင်းအကျပ်သူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
24 ။ အံ့သြဖွယ်ခြေထောက်တက်တူး
လိပ်ပြာတက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးခြေကျင်း Tattoosဂီတတက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးတက်တူးထရေဘဝဲတက်တူးခြေလျင်တက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးလက်တက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးrip တက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးစုံတွဲတက်တူးချစ်စရာတက်တူးလည်ပင်းတက်တူးလက်တက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးလတက်တူးအစ်မတက်တူးလက်မောင်းတက်တူးကြောင်တက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးဆင်တက်တူးမြှားတက်တူးမျက်စိတက်တူးဟင်္တက်တူးပန်းချီတက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းနောက်ကျောတက်တူးစိန်တက်တူးနေရောင်တက်တူးအသင်္ချေတက်တူးကျောက်ဆူးတက်တူးနှလုံး Tattoosငှက်တက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးKoi ငါးတက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးFeather Tattoo